I-Red Dead Redemption 2 Idonsela ku- $ 725 Million Wokuvula Impelasonto - Isiko Lopop
I-Red Dead Redemption 2 Idonsela ku- $ 725 Million ngeRekhodi-Ephula Iviki Lokuvula
I-Rockstar Games yakamuva kakhulu yasentshonalanga blockbuster, Ukuhlengwa Okubomvu Okubomvu 2 , ube nempelasonto ebeka amarekhodi.
Ngokuhamba kwezinsuku ezintathu, lo mdlalo uthathe imali engamaRandi ayizigidi ezingama-725 ekuthengiseni abathengisa umhlaba wonke, ngenkathi futhi ufika ngempelasonto enkulu kunazo zonke emlandweni wezokuzijabulisa, Imibiko yeRockstar Games .
iresiphi yekhukhi le-lofthouse ngaphandle kokhilimu omuncu
Lokho kungaphezulu kwefilimu ehola kakhulu emlandweni, Ama-Avengers: Infinity Wars , Obonile ingqikithi $ 640 million kule mpelasonto wawo wokuvula ku 2018. Nokho, Rockstar Games IGrand Theft Auto V has Ukuhlengwa Okubomvu Okubomvu 2 isigqi: Ukweba Okukhulu I-iteration yesihlanu idonse ukuthengisa okungaphezulu kwe- $ 1 billion ezinsukwini zayo ezintathu zokuvula. Umehluko uwukuthi IGrand Theft Auto V yethulwe ngoLwesibili, ngenkathi Ukuhlengwa Okubomvu Okubomvu 2 yethulwe ngoLwesihlanu, ivumela owokugcina ukuthi aphule irekhodi lempelasonto.
Ngokusho kweSony Interactive Entertainment , Ukuhlengwa Okubomvu Okubomvu 2 setha amarekhodi ama-oda wangaphambilini amahle kakhulu, ukuthengiswa kosuku lokuqala okuhle kakhulu, nokuthengiswa okuhle kakhulu kwezinsuku ezintathu zokuqala emakethe ku-Playstation Network.
Izithandani ezithinta ipipi okokuqala ngqa
Beka ku-1899 America ekugcineni komsila kwenkathi yeWild West, Ukuhlengwa Okubomvu Okubomvu 2 kulandela indaba yezaphulamthetho zokugcina ezisele — u-Arthur Morgan neqembu iVan der Linde — njengoba bephanga, bedubula, futhi belwa ezweni elingenakuthethelelana. Umdlalo ungowandulela wama-2010 Ukuhlengwa Okubomvu Okubomvu nesitolimende sesithathu kufayela le- Okubomvu Okubomvu uchungechunge.
Kube nenkulumo eningi ezungezile Ukuhlengwa Okubomvu Okubomvu 2 s soundtrack, efaka ingoma entsha evela kuDAngelo, esihloko sithi May I? Yima Unshaken. Njengoba umdlalo wokuqala weRockstar ukhiphe eminyakeni emihlanu, Ukuhlengwa Okubomvu Okubomvu 2 ifike ekusithekeni okuhlobene, enemininingwane embalwa yomdlalo eyabiwe ngaphambi kokwehla kwayo. Kubukeka sengathi i-soundtrack nayo ibiyingxenye yemfihlakalo yemidlalo, njengoba abathuthukisi begcina leyo mininingwane ingaziwa futhi.
abadlali bezemidlalo abahamba phambili sonke isikhathi
travis scott jordan 6 usuku lokukhishwa
amathoyizi r us ayabuya